“Let curiosity alive even in the darkness & restrictions” ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ၊ ကြိုးစားနိုင်စွမ်း၊ ဖြစ်နိုင်စွမ်းတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်ခံရတဲ့ အဆိုးရွားဆုံးအချိန်မှာတောင် စူးစမ်းချင်စိတ်၊ သိလိုစိတ်၊ နည်းလမ်းရှာဖွေချင်စိတ်တွေကို မသတ်ပစ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆက်ပြီးရှင်သန်အောင် မွေးမြူပါ။ အခြေအနေအသစ်ဖြစ်လာရင် စူးစမ်းချင်စိတ်၊ သိချင်စိတ်၊ အဖြေရှာလိုစိတ်က
အဲဒီလိုပြောလိုက်ရင် နားတောင်မနားရတော့ဘူးလား၊ တချိန်လုံးအလုပ်လုပ်နေရမှာလား လို့ ရုတ်တရက် တွေးမိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချိန်တိုင်းတကုပ်ကုပ်အလုပ်လုပ်နေဖို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရော လူရော အအားမနေဘဲ အကျိုးရှိတာ၊ ကိုယ့်အတွက် ကျေနပ်ရတာ တစ်ခုခုလုပ်နေဖို့ ပြောတာပါ။ အိမ်အလုပ်လုပ်တာဖြစ်နိုင်သလို ကလေးကို အချိန်ပေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခဏလေး အနားယူတာဖြစ်နိုင်သလို အလှူအတန်းလုပ်တာ၊
ဘဝက ဘာတွေပဲ ကိုယ့်ကို ပေးနေသည်ဖြစ်စေ၊ လက်ရှိမှာ ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ရောက်နေသည်ဖြစ်စေ.. ငါ့ဘဝက တန်ဖိုးရှိတယ်၊ ဒီအခြေအနေကို အကောင်းဆုံး ကျော်ဖြတ်သွားရမယ်လို့ အမြဲတွေးပါ။ 🔸 ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေများနေလား? ပိုပြီး ကူညီနိုင်အောင် ကိုယ်ကျန်းမာရမယ်။ 🔸 မိသားစုထဲ စိတ်သောကရောက်စရာတွေပြည့်နေလား? ကိုယ်ကပိုပြီး အားတင်းထားရမယ်။
ကြောက်စိတ်အခြေခံနဲ့လား၊ မေတ္တာစိတ်အခြေခံနဲ့လား။ နေ့စဉ်တိုင်း အချိန်တိုင်း လုပ်သမျှအလုပ်တွေမှာ အခြေခံအကြောင်းရင်း ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။ အကြောက်တရားအခြေခံနဲ့လုပ်တာက ပိုများလေ့ရှိပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ ဘုရားရှိခိုးရင်တောင် ကံမကောင်းမှာ ကြောက်လို့ရှိခိုးတာ၊ သေသွားရင် ငရဲကျမှာကြောက်လို့ရှိခိုးတာ.. အခြေအနေအရ အထုတ်ပြင်ရင်တောင် ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြင်တာ.. ကလေးတွေကို စကားပြောရင် ကိုယ်မနိုင်မှာ၊ ကိုယ့်ကို အာခံမှာ
ကိစ္စတစ်ခုကို အဖြေရှာမရသေး၊ စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတာနဲ့ မနက်အစော ထပြီး လမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးဖွဲဖွဲကျနေပေမဲ့ စဉ်းစားချင်တာကြောင့် သစ်ပင်အောက်မှာနေရင်း ကျေးဇူးတင်မိတာလေးတွေ ဖုန်းထဲ ချရေးဖြစ်ပါတယ်။ 💦 ဒီအချိန်မှာ အသက်ရှိနေသေးတာ.. နေစရာ စားစရာ ရှိနေသေးတာ.. 💦 ကိုယ် ဘာဖြစ်ဖြစ် နားထောင်ဖို့၊ ကူညီဖို့၊ အားပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့
ဒီကြားထဲမှာ တရားသေချာလေးအားထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ Spirituality စာအုပ်တွေနဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်တွေလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်အလုပ်ကို အရင်တည်းက လုပ်လာပေမဲ့ အခုပိုပြီး သေသေချာချာလုပ်ကြည့်တဲ့အခါ အများကြီး အကျိုးရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ရတာမို့ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ Being Open Minded (စိတ်နှလုံးသားကို ဖွင့်ထားခြင်း)
ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ တခါတုန်းက မြို့တစ်မြို့မှာ အဆုံးအစမရှိအောင် ကျယ်ပြန့်တဲ့နေကြာပန်းခင်းကြီး ရှိပါသတဲ့။ အဲဒီပန်းတွေပွင့်ချိန်ဆို လှလွန်းလို့ အနီးအနားမြို့တွေက လာလည်ကြ၊ မြို့ကလူတွေကလည်း ဂုဏ်ယူကြသတဲ့။ နေကြာပန်းခင်းရဲ့အလှထက် လူတွေပိုပြီး အံ့ဩချီးကျူးကြတာက အဲဒီအဆုံးအစမရှိတဲ့ ပန်းခင်းကို လူတစ်ယောက်တည်းက စိုက်ခဲ့တာမို့ပါ။ တနေ့ကျ လူငယ်လေးတစ်ယောက်က မြို့ကိုလာလည်ရင်း နာမည်ကြီးလွန်းတဲ့ နေကြာပန်းခင်းကြီးဆီကို ရောက်လာပါတယ်။
ဆိုးရွားတဲ့ အချိန်ကာလမှာ အကောင်းစိတ်မွေးဖို့၊ Positive ဖြစ်ဖို့က တအားကို ခက်ပါတယ်။ စိတ်ချမ်းသာရာကို ရှာဖို့ ခက်တဲ့အခါ၊ ဘဝက ခက်ခဲတဲ့အခါ၊ ဘေးကလူတွေက စိတ်ဓါတ်ကျနေကြတဲ့အခါ စိတ်ကြည်လင်အောင်နေဖို့ရာတောင် Guilty ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါ။ ငါ ကျန်းမာနေမှ ငါ့မိသားစုကို စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်။ ငါ့လောက်မှ အဆင်မပြေသူတွေ၊ ငါ့ဝန်ထမ်းတွေ၊
ဒီရက်ထဲ ကလေးလေးတွေလည်း စိတ်ပင်ပန်းကြ၊ ကလေးအမေတွေလည်း ကလေးတွေ စိတ်ဒဏ်ရာရမှာစိုးလို့ စိုးရိမ်ပူပန်ကြတယ်၊ တအိမ်ထဲနေသူအချင်းချင်း စိတ်တိုမိတယ်ဆိုတာလေးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ခုချိန်မှာ အပြင်ကလာတဲ့ မကောင်းတဲ့အင်အားတွေရှိတာမှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Little voice လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြောတဲ့ စကားတွေက ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ထဲ စွဲမသွားစေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော၊
အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိသားစုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဒီကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Self-Image ပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေအတွက် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Crisis ကာလတွေမှာ လူတွေရဲ့ အတွေးအမြင်တွေပြောင်းလဲသလို အယူအဆတွေ အပြုအမူတွေလည်း ပြောင်းလဲပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွင်းထဲက ယုံကြည်မှုတွေ ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြင်တဲ့ အမြင် Self-Image လည်းပြောင်းလဲပါတယ်။ အဲဒီအခါ